BVE - NAB Gosi Akụkọ site na Mgbasa Mgbasaozi. Onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke NAB Show, Onye NAB gosiri LIVE
Home » omume » BVE
họpụtara Gosi »
BVE bụ UK kasị ukwuu omume maka ọkachamara abuana ke ewere ọdịnaya site kere eke oriri. Ọ na-adọta na ngafe nke 15,000 ọbịa si ihe karịrị 60 mba na-agwakọta ọkachamara na-ada free nzukọ ọmụmụ na ihe ngosi nke na-egosi 250 + nke na-eduga Nsukka, ndị nkesa na resellers nke ọkachamara mmepụta na agbasa ozi n'ikuku na ngwá na usoro. Ekpuchi ihe niile si igwefoto ngwa ka 360 workflow ngwọta, BVE n'ezie bụ oké mkpa na agbasa ozi n'ikuku na mmepụta technology omume.
Ọbịa BVE nwere ike na-atụ anya irite uru na a oke nke n'elu 120 awa nke free ezinụlọ, ikpe ọmụmụ, panel mkparịta ụka na mmụta noo, n'ihu site ọkachamara na ubi ha n'elu 3 ụbọchị omume, n'ịhụ na ha nwere ike upskill, na-amụta banyere abịa technology na ike ihe ọmụma ebe nwekwara ịhụ, na-emetụ na-anwale nnọọ ọhụrụ kit na IZIRỊTA ndị ọgbọ ha.
+ Google Kalinda+ ICal Export
Royal Victoria n'ọdụ ụgbọ mmiri, 1 Western Gateway